मधेशको चिसोमा राजनीति नगर (सम्पादकीय)
हरेक वर्ष जाडोको मौसममा यो क्रम दोहोरिने गरे पनि सरकार र सम्बद्ध क्षेत्रका कथित जनप्रतिनिधिहरूले जाडोले कठ्यांग्रिएर मर्नुपर्ने नियति टार्न कुनै चासो राखेको देखिंदैन ।
निर्वाचनपछि आम मधेशीजनमा पनि यसले राजनीतिक स्थायित्वको विश्वास बढाएको छ र स्थिर सरकार तथा मुलुकको समृद्धिप्रति अपेक्षा जगाएको छ ।
यो निर्वाचनबाट आएको मतादेशलाई पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्दै मधेशको आर्थिक–सामाजिक पक्ष तर्फ पनि उनीहरू केन्द्रित हुनु पर्छ । मधेशको नाममा राजनीति त गरिन्छ तर मधेशको विकासमा ध्यान कसैको गएको छैन ।
अब प्रतीक्षा दोस्रो चरण निर्वाचनको (सम्पादकीय)
जनताले नरूचाएका र समाजले नपचाएका व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाएका कारण कतिपय मतदाता खुसी छैनन् । यस्ता उम्मेदवारका कारण नचाहेर पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यतामा कतिपय मतदाता रहेका छन् ।
निर्वाचनको सम्मुखमा वाम गठबन्धनले मधेशमा आक्रामक राजनीतिक कार्यक्रम बढाए पनि आफ्नो विश्वसनीयतालाई जोगाउन भने सकेको छैन, मौका अनुसार जे पनि बोल्ने र जता पनि लाग्ने व्यवहारका कारण ।
दलहरूको मधेश मोह (सम्पादकीय)
मधेशकेन्द्रित देखिन थालेका प्रमुख पार्टीहरूको मधेशसम्बन्धी धारणा मात्रै होइन कि त्यहाँ छिर्ने दाउ पनि आफ्नै खालको छ । खासगरी पछिल्लो समयमा मधेशमा आन्दोलन चर्केपछि प्रमुख दलहरूप्रति नकारात्मक धारणा मधेशमा एकाएक बढ्यो ।
प्रतिनिधि / प्रदेशसभा निर्वाचन र मधेश (सम्पादकीय)
मधेशसँग चर्काइएको अन्तरविरोधले मधेशको राजनीति कुन दिशातिर अग्रसर हुन्छ, यसको पनि ठोकुवा राजनीतिक ज्योतिषीहरूले गर्न सक्दैन ।
मधेशमा चुनावी गठबन्धन : मिसन कि फेसन ? (सम्पादकीय)
आगामी निर्वाचनमार्फत मधेशी दलहरू स्पष्ट योजना, राम्रा कार्यक्रम, तिनलाई पूरा गर्ने कार्य प्रणाली र विश्वासिला उम्मेदवार दिएर नागरिकको मन जित्नु पर्छ । चुनावी फेसनका लागि नभई देशको विकास र नागरिक सम्पन्नताको ‘मिसन’का लागि एकता भए त्यो स्वीकार्य हुनेछ ।
भाषण र दस्ताबेजहरूमा मात्रै होइन, उम्मेदवार छनोट गर्दा नेतृत्वले व्यवहारमै हाम्रा होइन राम्रालाई अवसर दिनुपर्छ । आम मतदाताले पनि सही उम्मेदवार चुन्ने अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि तीन दल भएर होइन सिंगो एक दल भएमा मात्रै राजनीतिक मैदानमा शक्तिशाली हुनेछन् । अन्यथा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य संकटतिर धकेलिने निश्चित छ ।
मधेशका अधिकारकर्मी एकजुट होऊ (सम्पादकीय)
मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूबीच एकता वा सहकार्यका लागि पहलको थालनी मधेशका अधिकारकर्मीहरूले गर्नुपर्छ । मधेशको हितैषी आजसम्म ठूला दलहरू कहिल्यै न थिए र न रहनेछन् ।
उत्साहप्रद निर्वाचनको सन्देश (सम्पादकीय)
स्थानीय तह पुनःसंरचनापछि यो पहिलो निर्वाचन हो । निर्वाचनपछि छानिने जनप्रतिनिधिले पहिलोपटक कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक भूमिका निर्वाह गर्दै छन् । यसको अर्थ स्थानीय तहले आवश्यक कानुन, नियम बनाउँदै स्रोतसाधन व्यवस्थापन, परिचालन र केही मुद्दा निरूपणको कामसमेत गर्नेछन् ।
निर्वाचन सफल बनाउन जरूरी (सम्पादकीय)
यतिखेर प्रदेश नं. २ का आठ जिल्ला स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रदेश नं २ का मतदातामा उत्साहको वातावरण देखिएको हो ।
संविधान संशोधन फेल हुँदा मधेशीहरू हारे वा आत्मसमर्पण गरे र चुनावमा आए भन्ने सोचियो भने मूर्खता हुनेछ ।
निर्वाचनको सदुपयोग गरौं (सम्पादकीय)
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको अधिकतम् सदुपयोग गर्न विशेषतः मधेशकेन्द्रित दलले सक्रियता देखाउन सक्नुपर्छ । निर्वाचनको माध्यमले आफ्नो अवस्था, व्यवस्था र बाध्यताहरू जनताबीच पस्किनुको साथसाथै नयाँ योजना र विश्वास पाउन पनि निर्वाचनको सदुपयोग गर्न जरूरी छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ तर यस्तो अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा बेलाबखत उत्पन्न हुने अविश्वास र असमझदारीलाई सुझबुझपूर्ण कूटनीतिको सञ्चालनबाट परास्त गर्दै दुबै मुलुक अघि बढ्नु जरूरी छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई पनि त्यहीं आलोकमा दृष्टिपात गर्नुपर्छ ।
बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति पर्दा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको योजनासहित सरकार चनाखो बस्नुपर्छ । अनि मात्रै प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमहरूलाई न्यून गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले यी कुनै पनि पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदाको दुष्परिणाम भोग्न जनता बाध्य छन् ।
राजपा र एमालेको हठ, कति प्रसांगिक (सम्पादकीय)
राजपा संविधानको संशोधन माग गरिरहेछ, सरकार त्यसलाई टाल्दै अन्ततः राजपा बिनाको तेस्रो चरणको निर्वाचन चाहिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
अधिकारबाट बञ्चित पारेर एकथान संविधान त लेखियो तर संविधानको घनिभूत रूपमा भइरहेको विरोध पनि शक्ति केन्द्रको जानकारीभन्दा बाहिर छैन ।
संविधान संशोधनको भविष्य (सम्पादकीय)
राजनीतिक बृत्तमा निकासका लागि फरक फरक रोडम्यापका बारेमा छलफल भएका छन् । आखिरमा अहिलेको परिवेशमा अवरूद्ध राजनीतिक निकासको वास्तविक रोडम्याप के हुनसक्छ, त्यसबारेमा गम्भीर बहस दलहरूबीच हुन सकिरहेको छैन ।
संविधान संशोधनको बाधक कांग्रेस ! (सम्पादकीय)
आफूहरूले निर्वाचन सार्न माग नगरेको र त्यसबारे कुनै सल्लाह नभएको मधेशी नेताहरूको भनाइले पनि कांग्रेसले आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गर्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले राजपा र एमालेबीच भएको भनिएको वार्ताहरूले संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन सक्ने सकारात्मक सन्देश त दिएको छैन तर यस्ता वार्ताहरू सत्तापक्ष र राजपाबाट निरन्तर भइरह्यो भने निश्चित रूपमा एमाले पनि लचिलो भएर आउन सक्ने सम्भावना छ ।
निर्वाचन स्वच्छ हुनका निमित्त साझा हुन जरूरी छ र राजपाबिनाको कुनै निर्वाचन साझा हुन सक्दैन । साझा नभएका निर्वाचनहरू भयमुक्त हुँदैनन् र भयसहितको निर्वाचनले कानूनी वैधता पाएपनि सामाजिक स्वीकृति पाउँदैन ।
कठिन अग्निपरीक्षामा राजपा (सम्पादकीय)
राष्ट्रिय पार्टी भनि दाबी गरिए पनि प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र खुम्चाउनु यसका लागि कठिन अग्निपरीक्षा हुनेछ । त्यसैले राजपाले अब एउटा ठोस निर्णय गरी रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन हातबाट गयो, गयो, तेस्रो चरण पनि यसै गरी गयो भने उसलाई कार्यकर्ता जोगाउन र संगठन बचाउन गाह्रो नहोला भन्न सकिन्न ।
जबसम्म मधेशको माग र भावना संविधान भित्र पर्दैन, निर्वाचन गरेपनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । राजपाको विरोधका बावजुद् पनि जसोतसो निर्वाचन हुन सक्ला तर काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको चुनावको सन्देश के जाला ?
मधेशी दलहरू खासगरी राजपा र संघीय फोरमले आफ्नो मुद्दालाई बाच्य राख्न सरकारसँग सम्झौतापरस्त नभइ बुँदागत रूपमा छलफललाई केन्द्रित गरी आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ तर, यसको अर्थ दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
राजपाले संविधान संशोधनको विषयमा हालसम्म भएको प्रगति, उपलब्धीलाई मधेशी जनतालाई सम्झाउँदै निर्वाचन पछि यी माग उठाउन सकिने भन्ने विश्वासिलो आधार दिलाएर निर्वाचनको महाअभियानमा होमिनु उपयुक्त हुन्छ ।
संयमता अपनाऊ, मधेश जाऊ
मधेश अब आग्रह, आश्वासन, आशंका र अपमानभित्र लुकेर बसिरहँदैन । समस्याका दीर्घकालीन समाधान र सम्मानसहितको सहभागिता दिन सकिएन भने यो निर्वाचनले एउटा समुदायलाई जिताउँला, तर मुलुक हार्छ ।